Haweeneyda umulisada ka ah dhulka buuraleyda ah iyo sida cajiibka ah ee ay u shaqeyso - BBC News Somali
Haweeneyda umulisada ka ah dhulka buuraleyda ah iyo sida cajiibka ah ee ay u shaqeyso
7 Jannaayo 2019
Image caption Dumarka deegaankeeda ayaa u aqoonsan iney haweenka darajo dheer tahay
Tiro kala bar ka sii yar oo ka mid ah haweenka dalka Baakistaan umuliso ma helaan xilliga ay dhalayaan
Deegaanka buuraleyda Himilaaya ee dalkaas, haween fara badan waxay umulaan iyagoo aan wax caawinaad ah heysanin isla markaana aysan ka ag dhaweyn umuliso xirfad leh.
Gabdhan lagu magacaabo Sherbano waxay shakhsi ahaan u qaadatay khibraddaas dhalmada lagu rafaado ah, wayna ogtahay dhibaatada ay ku heyso deegaanka.
Sidaas awgeed waxay go'aan ku gaartay iney kaligeed u istaagto sidii ay u buuxin lahayd booska bannaan, waxayna qaadatay tababar umuliso nimo ah, si ay uga howl gasho xaafadda ay ka soo jeeddo.
Dad ka shaqeeya xuquuqda oo laga waayay Pakistan
"Waligey ma xisaabinin laakiin kolley 100 wey ka badan yihiin dumarka aan ilmaha ka umuliyay. Wax mushaar ah kuma qaato shaqadan. Qof ayaa laga yaabaa inuu isiiyo koob shaah ah, dadka qaarna waxay i siiyaan 100 rubi. Dadka meeshan ku nool ma shaqeeyaan waana sabool, laakiin aniga waxaa iga go'an inaan caawiyo", ayey tiri Sherbano.
Haweeneydan waxay muddo 10 sano ah umuliso ka ahayd xaafadda buuraleyda ah ee ay ku nooshahay.
Howshan muhiimka ah waxaa ku kalliftay baahida uu deegaanka u qabo inuu helo umuliso u istaagta dumarka xaamilada ah iyo xanuun fara badan oo ay iyada qudheeda soo martay.
"Markii uu cunugeyga curadka ah dhalanayay, xaafadda oo dhan umuliso ma lahayn. Waxaan foolanayay 2 ilaa 3 maalmood, anigoo cid i caawisa aan helin. Intii uu xanuunka i hayay ayaan go'aan ku gaaray in markii aan ka baxo xanuunka isla markiiba aan billaabo tababar aan ku baranayo umulisanimo", ayey tiri.
Waxay sidoo kale sheegtay in deegaanka buuraleyda ah ee Himilaya uusan ka jirin wax adeeg ah oo loogu tala galay shacabka, oo xitaa gaari aan halkaas laga helin.
Image caption Waxay aad u faraxdaa markii ay aragto ciyaalki ay hooyooyinkooda ka ulisay oo Iskuullada aadaya
Maalin ama habeen, wakhtigii loo yeeraba, waxay dadka u ballan qaadday iney u imaaneyso, si ay uga umuliso.
Sida xaqiiqada ah, in xaafadaha buuraleyda ku yaalla la isaga kala gudbo waa mid aad u adag.
Dumarka deegaankaas ku nool waxay Sherbano u aqoonsan yihiin "iney haweenka darajo dheertahay.
Umulisadan cajiibka ah waxay xitaa qalabka ku soo iibsataa kharashkeeda, cidna ma weydiisato mushaar.
Arrinta kale ee ay ku caan baxday ayaa ah iney si joogto ah u booqato dumarka uurka leh, si ay xaaladdooda ula socoto.
"Waxaan kula taliyaa iney si fiican wax u cunaan isla markaana iska taxadaraan", ayey tiri.
Markii ugu horreysay ee ay howshan billaabeysay waxay ahayd umulisada kaliya ee deegaankaas, balse hadda waxaa ku dayday 3 ilaa 4 haween ah oo kale, kuwaasoo umulisooyin ka noqday buuraleyda.
Iyadoo arrintaas ka hadleysa ayey tiri: "Wali tiradaas aad bay u yartahay kumana filna baahida deegaanka. Waxaan rajeynayaa inaan heli doonno adeeg caafimaad oo sax ah".
Sida laga soo xigtay hay'adda xannaanada carruurta ee Unicef, 39% ka mid ah haweenka dalka Baakistaan oo kaliya ayaa hela umuliso, marka ay foosha qabato.
Sherbano waxaa dhawaan shaqo toos ah siisay dowladda, waxayna sheegtay iney aad u faraxdo marka ay aragto carruurtii ay hooyooyinkooda ka umulisay oo weynaaday isla markaana wax barasho u aadaya iskuullada.